Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee Gloves la tuuri karo - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Ilaalinta > galoofyada la tuuri karo
Warshadaha qaar ee leh baddelka gacan-gashiyada oo badan, galoofyada la tuuri karo ayaa sida caadiga ah lagula talinayaa si looga fogaado infekshanka isdhaafka ah oo si weyn loo badbaadiyo kharashaadka beddelka, sida warshadaha caafimaadka, shaybaadhka, warshadaha cuntada iyo warshadaha kale ee leh shuruudaha nadaafadda sare.
Gacan-gashiyada la tuuri karo waa nooc galoofyada ah oo ka samaysan go'yaal caag khafiif ah ama filimo. Gacan-gashiyada la tuuri karo waxay inta badan ku yimaadaan laba walxood: galoofyada cinjirka ah iyo galoofyada nitrile
Gacan-gashiyada la tuuri karo waxay si weyn u ilaalin karaan badbaadada dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha marka ay la xiriiraan bukaanka. Sidoo kale waxay ka fogaan kartaa dhibaatada caabuqa dhaawaca ee bukaanka.
Waxaanu bixinaa Gloves Medical Latex kaas oo leh xoog cufan oo sarreeya iyo dareen taabasho badan. Waa dhumuc weyn oo aan biyo lahayn, 100% qaacido-cusub si kor loogu qaado jilicsanaanta iyo jirdhiska. Waxay leedahay dabacsanaan xoog leh oo buuxa, iska caabin jeexjeex ah, ma jirto wax daadsan, dhegdheg iyo raaxo leh. Waa ammaan oo fududahay in la isticmaalo, xoog badan oo raagaya, ma fududa in la xoqo oo la jebiyo.
galoofyada cinjirka ah ee la tuuri karo ee budada ah
Waxaanu bixinaa galoofyada cinjirka ah ee bilaashka ah ee budada ah kaas oo leh dabacsanaan xoog leh oo buuxa, iska caabin jeexjeex ah, aan lahayn wax daadsan, dhegdheg leh oo raaxo leh. Waa ammaan oo fududahay in la isticmaalo, xoog badan oo raagaya, ma fududa in la xoqo oo la jebiyo. Waxa ay leedahay xoog xajin oo sarreeya iyo dareen taabasho badan. Waa dhumuc weyn oo aan biyo lahayn, 100% qaacido-cusub si kor loogu qaado jilicsanaanta iyo jirdhiska.
galoofyada Latex ee la tuuri karo
Waxaan bixinaa galoofyada caagagga ah ee la tuuri karo kaas oo leh asal rasmi ah, hubin tayo leh, saxsanaan wanaagsan, dhinac ka daadan, dhegdheg iyo raaxo leh, kor u qaada dareenka gacan fiiqan. Waa ammaan oo fududahay in la isticmaalo, xoog badan oo raagaya, ma fududa in la xoqo oo la jebiyo.
Baaritaanka Caafimaadka ee La Tuuri karo
Waxaan bixinaa baaritaan caafimaad oo la tuuri karo kaas oo leh saxnaan wanaagsan, aan lahayn wax daadin dhinac ah, dhegdheg leh oo raaxo leh, kor u qaadaya dareenka gacan fiiqan. Way adag tahay oo waarta, ma fududa in la xoqo.
Gacan-gashiga Nitrile ee Raaxada la Tuuri karo
Waxaanu bixinaa galoofyada nitrile-ka ee raaxada ee la tuuri karo taas oo aan ahayn wax daadanaya walxaha xidhidhiyaha. Waa saxsanaan wanaagsan, dhinac ka daadan, dhegdheg iyo raaxo leh, waxay kor u qaadaysaa dareenka gacanta fiiqan.
galoofyada Nitrile ee nadiifka ah
Waxaan bixinaa galoofyada nitrile-ka ee aan nadiifka ahayn taasoo aan ahayn daadad alaabta daboolaysa. Waa saxsanaan wanaagsan, dhinac ka daadan, dhegdheg iyo raaxo leh, waxay kor u qaadaysaa dareenka gacanta fiiqan.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub galoofyada la tuuri karo oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah galoofyada la tuuri karo soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato galoofyada la tuuri karo la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.